Wed, Jun 3, 2020 at 12:14pm
मेस्सी, रोनाल्डो र एमबाप्पे यो वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीमा मनोनय, अरु को को परे ?
काठमाडौँ, ९ साउन विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले फिफा वर्ष खेलाडीका लागि १० जनाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ । फिफाले मंगलबार राति सन् २०१७–१८ का लागि १० खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो । फिफाले सार्वजनिक गरेको १० खेलाडीमा पार्चुगलका क्रिष्टियानो रोनाल्डो, अर्जेन्टिनाका लिओनल मेसी, फ्रान्सका केलियन एमबाप्पे, एन्टोनी ग्रिजम्यान र राफायल भाराने टपटेन सूचीमा परेका छन् । यसैगरी बेल्जियमका इडेन हाजार्ड, केभिन..
चेल्सीले फ्रेन्च मिडफिल्डर एनगोलो कान्टेलाई क्रिस्टियानो रोनाल्डोको मुल्य भन्दा कममा नबेच्ने !
एजेन्सी, ८ साउन इङ्लिस क्लब चेल्सीले फ्रेन्च मिडफिल्डर एनगोलो कान्टेलाई ११० मिलियन युरोमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पिएसजी) जान लागेका मिडफिल्डर कान्टेमाथि चेल्सीले ११० मिलियन युरोको प्रस्ताव अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पिएसजीले कान्टे भित्र्याउने विषयमा चेल्सीसँग वार्ता गरिरहेको छ। फ्रान्सका युवा खेलाडी केलियन एमबाप्पेले कान्टेलाई क्लबमा भित्र्याउने पहल थालेका थिए। कान्टेलाई भित्र्याउने तयारीसँगै पिएसजीले अर्जेन्टिनाका एञ्जल..
अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आजबाट शुरु
काठमाडौँ, ७ साउन ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको चौथो संस्करण सोमबारदेखि यहाँ शुरू भएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को कभर्ड हलमा सञ्चालित उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले ब्याडमिन्टन खेलेर गरे । सो अवसरमा मन्त्री विश्वकर्माले खेल क्षेत्रमा भएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पदक तालिकामा सुधार गर्दै लैजाने बताए..
नेपालले पहिलो अभ्यास खेलमा ह्याम्पसायरलाई २४३ रनले हरायो
एजेन्सी, साउन ६ युरोप भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पहिलो अभ्यास खेलमा फराकिलो जित निकालेको छ। कप्तान पारस खड्काको शतकीय इनिङ्सको मद्दतमा नेपालले पहिलो अभ्यास खेलमा इङ्ल्याण्डको स्थानीय क्लब ह्यामसायर होग्सलाई २ सय ४३ रनले पराजित गरेको हो। ३ सय ६३ रनको लक्ष्य पछ्याएको ह्यामसायर ३७ दशमलव १ ओभरमा १ सय १९ रनमा समेटिएको थियो। ह्यामसायरका ह्यारी फिसलले सर्वाधिक ३३ रन बनाएका थिए।..
ब्राजिलियन गोलरक्षक एलिसनलाई कीर्तिमानी मूल्यमा इंग्लिस क्लब लिभरपुलले भित्र्यायो
काठमाडौं , ४ साउन इंग्लिस क्लब लिभरपुलले कीर्तिमानी रकममा इटालियन क्लब एएस रोमाका ब्राजिलियन गोलरक्षक एलिसनलाई भित्र्याउने भएको छ । रोमाबाटै गत सिजन लिभरपुल आएका इजिप्सियन स्ट्राइकर मोहम्मद सलाहको उत्कृष्ट प्रर्दशनसँगै चौंथो स्थानमा रहँदै सिजन सकेको लिभरपुलले उपाधि जित्ने अभियानलाई सार्थक बनाउन उत्कृष्ट गोलरक्षक आवश्यक परेकाले उनलाई आवद्ध गर्न लागेको बताएको छ । हालै सम्पन्न विश्वकपमा समेत ब्राजिलले खेलेका सबै पाँच खेल..
नेपाली क्रिकेट टोली आज बेलायत जाँदै, लर्डस् मैदानमा हुने खेलको प्रतिक्षा !
काठमाडौँ, ३ साउन : बेलायातको लर्ड्समा हुने एमसीसी, नेदरल्याण्ड् सम्मलित त्रिकोणात्मक श्रृखंला र नेदरल्यान्ड्विरुद्ध हुने एक दिवसिय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न जाने नेपाली टोलीलाई बुधबार विदाई गरिएको छ । युुवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत (सुनार) विश्वकर्माले टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै विदाई गरेका हुन् । त्रिकोणात्मक श्रृखंला जुलाई २९ मा लर्डस् मैदानमा आयोजना हुनेछ । त्यसपछि नेपाल र नेदरल्यान्ड्सबीचको एक दिवसीय क्रिकेट अगस्ट १ र..
एसियाली खेलकूदमा नेपालको सहभागिता, ४ नयाँ खेलको स्थान निश्चित
काठमाडौँ, २ साउन एसियाली महादेशको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताका रुपमा मानिएको १८औँ एसियाली खेलकूदमा यसपटक नेपालबाट चार नयाँ खेलले स्थान पाएका छन् । इण्डोनेसियाको राजधानी जार्कातामा आगामी भदौ २ गतेदेखि १७ गतेसम्म हुने यसियाली खेलकूदमा प्याराग्लाइडिङ, क्लाइमिङ स्पोर्ट, पेनकेक सिलात र स्केटबोर्ड गरी चार नयाँ खेल छनोटमा परेका छन् । यसपटकको एसियाली खेलकूदमा नेपालबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी २८ खेल समावेश हुँदैछ । दक्षिण कोरियाको..
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर शक्ति गौचनद्वारा सन्यासको घोषणा
काठमाडौं, २ साउन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर शक्ति गौचनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट संन्यास घोषणा गरेका छन् । युरोप टुरमा जाने टोलीका लागि बुधबार आयोजित बिदाई कार्यक्रममा उनले यो नै अन्तिम विदेश टुर हुने बताएका हुन् । नेपालले साउन १३ मा लड्र्समा एमसीसी र नेदरल्याण्ड्ससँग टी-२० सिरिज खेल्दैछ । यस लगत्तै नेदरल्याण्ड जानेछ र पहिलो एकदिवसीय श्रृखला खेल्नेछ । एकदिवसीय श्रृखला साउन १६..
अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलबाट बाहिरिएपछि मेसी छुट्टी मनाउन परिवार र साथी सहित इबिजा
एजेन्सी, २ साउन मेसी परिवारसहित छुट्टी मनाउन पहिलोपटक क्याटलान पुगेका छन् । अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलबाट बाहिरिएपछि उनी पहिलोपटक छुट्टी मनाउन इबिजा पुगेका हुन् । विजेता फ्रान्ससँग अर्जेन्टिना अन्तिम १६ मा ४–३ ले पराजित भएपछि मेसी पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा रिफ्रेसमेन्टका लागि श्रीमती, छोरा तथा नजिकका साथीभाइसँग इबिजा पुगेका हुन् ।इबिजामा रहँदा मेसीले सनबाथ गर्दै साथीभाईसँग रमाइलो गर्र्दैे पौडी खेलेका थिए ।तर, उनी दिनभर..
विश्वकप महाकुम्भ : फ्रान्स र क्रोएसियाका फुटबल खेलाडीलाई सर्वोच्च सम्मान र स्वागत
पेरिस, १ साउन रुसको मस्कोमा भएको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको विजेता फ्रान्सका फुटबल टोलीलाई देशकै सर्वोच्च सम्मान ‘लिजन दि अनर’ प्रदान गरिने भएको छ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति एम्यानुएल माक्रोँको कार्यालयले फुटबल टोलीलाई सो सम्मान गर्ने घोषणा गरेको थियो । विजयपछि फ्रान्स फर्किएका फुटबल टोलीको राजधानी पेरिसमा भव्य स्वागत गरिएको र उनीहरुको सम्मानमा राष्ट्रपति माक्रोँले भोजको आयोजना गर्नु भएको थियो । विश्वकप ट्रफीसहित स्वदेश फर्केको सो..
एजेन्सी, १ साउन फ्रान्सले दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जितेपछि आइतबार राति केलियन एम्बाप्पेले ट्रफीलाई चुम्दै गरेको तस्बिर राखेर ट्वीट गरे- माई लभ। आइतबार राति भएको क्रोएशियाविरूद्धको खेलमा एम्बाप्पेले एक गोल हानेका थिए। ४ गोल गरेका १९ वर्षीय एम्बाप्पे २१ औं संस्करणको विश्वकपमा उत्कृष्ट युवा खेलाडी बने। पहिलो पटक विश्वकप खेलेका एम्बाप्पेले ब्राजिलका महान फुटबलर पेलेका तीन रेकर्ड बराबर गरिदिएका छन्। अर्जेन्टिनाविरूद्धको खेलमा २ गोल गरेपछि..
विश्वकप फुटबल: "रुसबाट बिदा भयौँ, अब कतारमा भेटौँला"
काठमाडौँ, ३२ असार एक्काइसौँ संस्करणको विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आइतबार राति सम्पन्न भएको छ । फाइनल खेलमा फ्रान्सले क्रोएसियालाई ४–२ गोलअन्तरले पराजित गर्दै उपाधि चुम्यो । फ्रान्सले दोस्रो पटक विश्वकपको उपाधि जितेको हो । सन् १९९८ मा फ्रान्सले आफ्नै भूमिमा ब्राजिललाई ३–० गोलअन्तरले हराउँदै पहिलो पटक विश्वकपको उपाधि हात पारेको थियो । बीस वर्षअघि क्रोएसिया विश्वकपको सेमिफाइनलमा आयोजक फ्रान्ससँग क्रोएसिया २–१ले पराजित भएको थियो..
२० वर्षपछि फ्रान्सलाई विश्वकपको उपाधि, क्रोएसिया ४–२ गोलअन्तरले स्तब्ध (तस्वीरमा हेर्नुस्)
काठमाडौँ, ३२ असार : रुसमा सम्पन्न विश्वकप फुटबल – २०१८ को उपाधि फ्रान्सले हात पारेको छ । रुसको सेन्ट मस्कोस्थित लुजनिकी रङ्गशालामा आज सम्पन्न फाइनल खेलमा युरोपेली राष्ट्र फ्रान्सले युरोपकै क्रोएसियालाई ४–२ गोलअन्तरले हराउँदै सन् १९९८ पछि विश्वकप फुटबलको उपाधि चुमेको हो । खेलको १८औँ मिनेटमा क्रोएसियाका मारियो मान्जुकिकले आफ्नै पोष्टमा आत्मघाती गोल गरेका थिए । खेलको २८औँ मिनेटमा क्रोएसियाका इभान..
काठमाडौँ, ३१ असार रुसको राजधानी मस्कोस्थित लुझ्निकी रंगशालामा हुने खेलमा फ्रान्स र क्रोएसिया उपाधिका लागि भिड्दैछन् । फाईनल खेलको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । प्रधानमन्त्री, विभिन्न पार्टीका नेताहरु र मन्त्रीहरु समेतले आईतबार साँझ हुने विश्वकप फाईनल धुमधामसँग हेर्ने मनशाय बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आईतबार हुने विश्वकप फुटबलको फाईनलमा फ्रान्सको समर्थन गर्ने..
विश्वकपको उपाधिका लागि आज महाभीडन्त, जोशिलो क्रोएसिया र बलियो फ्रान्स आमने–सामने
काठमाडौं, असार ३१ । विगत १ महिनादेखि रुसमा जारी सन् २०१८ विश्वकपको फाइनल खेल अन्र्तगत उपाधिका आज महाभिडन्त हुँदै छ । नेपाली समय अनुसार राति पौने ८ः४५ बजे निकै बलियो मानिएको फ्रान्स र युवा खेलाडीहरुले भरिएको जोशिलो समूह क्रोएसिया आमने–सामने हुँदैछन् । खेल रुसको राजधानी मस्कोस्थित लुज्हनिकी रंगशलामा हुने छ । ब्राजिल, अर्जे्न्टिना, जर्मनी र इटालीमध्ये कुनै पनि टोली फाइनल प्रवेश नगरेको..
विश्वकप फुटबलः तेस्रो स्थानका लागि बेल्जियम र इङ्ल्यान्डबीच सेन्ट पिटर्सबर्गमा भीडन्त
काठमाडौं, असार ३० । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलको तेस्रो स्थानको प्लेअफका लागि शनिबार बेलुका पौने ८ बजेदेखि बेल्जियम र इङ्ल्यान्ड भिड्दै छन् । नेपाली समयअनुसार आज साँझ पौने ८ बजे सुरु खेल सेन्ट पिटर्सबर्ग रंगशालामा हुने प्रतिस्पर्धा पनि निकै रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि भएको सेमिफाइनल खेलमा क्रोएशिया र फ्रान्ससँग पराजित भएका टोलीहरु बेल्जियम र इङ्ल्यान्डबीच यो खेल हुन लागेको..
दक्षिण एशियाली तथा आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगिता काठमाडौँमा शुरु
काठमाडौँ, २९ असार दक्षिण एशियाली तथा आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगिता काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघद्वारा आयोजित उक्त प्रतियोगिताको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एक कार्यक्रमबीच गरे । प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, चीन र तुर्किमिनिस्तानका खेलाडी सहभागि छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले यस किसिमको प्रतियोगिताले खेलक्षेत्र र खेलाडीको स्तरोउन्नति हुने बताए । प्रतियोगितामा जुनियर र..
काठमाडौं, असार २८ । विगत १ महिनादेखि रुसमा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेशका लागि भएको भीडन्तमा क्रोएसियाले पूर्वविश्वकप बिजेता इंग्ल्यान्डलाई हराउँदै इतिहास रचेको छ । विश्वकपको फाइनलमा पहिलोपटक प्रवेश गरेको क्रोएशियाले बुधबार रातिको सेमिफाइनल खेलमा इंग्ल्यान्डलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो । खेलको सुरूआतको पाँचौ मिनेटमै क्रोएसियाले गोल खानुपरेको थियो । इंग्ल्यान्डका किएरन ट्रिपिएरले खेल सुरू भएको ५ मिनेटमै फ्रि–किकमार्फत..
विश्वकप–सेमिफाइनलमा क्रोएसिया र इङ्ग्ल्याण्ड भिड्दै, क्रोएसिया अहिलेसम्म अपराजित
काठमाडौँ, २७ असार : फिफा विश्वकप–२०१८ अन्तर्गतको दोस्रो सेमिफाइन खेलमा क्रोएसिया र इङ्ग्ल्याण्ड आमने सामने हुँदैछन् । रसियामा जारी विश्वकपमा दुवै टोली विजय लक्ष्यका साथ आज राति ११ः४५ बजे भिड्दैछन् । सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गर्दा क्रोएसिया अपराजित छ भने इङ्ग्ल्याण्ड समूह चरणमा बेल्जियमसँग पराजित भैसकेको छ । क्वाटरफाइनलमा क्रोएसियाले आयोजक रसियालाई ट्राइब्रेकरमा ४–३ गोलअन्तरले पराजित गरिसकेको छ भने इङ्ग्ल्याण्डले स्विडेनलाई २–० ले..
बेल्जियमलाई १–० गोलले पराजित गर्दै फ्रान्स विश्वकप फुटबलको फाइनलमा
काठमाडौं, असार २७ । रुसमा जारी विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल अन्र्तगत मंगलबार राति भएको खेलमा फ्रान्स बिजेता बन्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सुरुबाट नै निकै रोमाञ्चक रहेको सेमीफाइनलको खेलमा फ्रान्सले बेल्जियमलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै १२ बर्षपछि फाइनलसम्मको यात्रा सुनिश्चित गरेको हो । खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी खेलेका यी दुई समूहबीच निकै नै कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । खेलको..
फिफा विश्वकप– २०१८ : मंगलबारदेखि सेमिफाइनल शुरु, आज राति फ्रान्स र बेल्जियम भिड्दै
काठमाडौँ, २६ असार : रुसमा जारी २१ औँ संस्करणको फिफा विश्वकप– २०१८ को सेमिफाइनल खेल मंगरबारदेखि शुरु हुुने भएको छ । यस पटकको विश्वकपको सेमिफाइनलमा युरोपका चार टोलीले प्रतिष्पर्धा गर्ने भएका छन् । यसैले विश्वकपको उपाधि पनि युरोपेली देशले नै भित्र्याउने निश्चित छ । सेमिफाइनलमा फ्रान्स(घरेलु मैदानमा ब्राजिललाई हराई १९९८को विजेता), बेल्जियम, बेलायत (घरेलु मैदानमा तत्कालीन प जर्मनीलाई हराई १९६६को विजेता)..
गत सिजन मात्र बार्सिलोना आएका पाउलिन्हो फेरि चिनियाँ क्लब फर्किए
एजेन्सी, २५ असार स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाबाट व्यवसायिक फुटबल खेल्दै आएका ब्राजिलियन मिडफिल्डर पाउलिन्हो चिनियाँ क्लब फर्किएका छन्। गत सिजन मात्र चाइनिज सुपर लिग क्लब गोन्जाउ एभरगार्डबाट बार्सिलोना गएका पाउलिन्हो फेरि पुरानै क्लब फर्किएका हुन्। २९ वर्षिय मिडफिल्डर पाउलिन्होलाई बार्सिलोनाले ४० मिलियन युरोमा ४ वर्षको लागि अनुबन्ध गरेको थियो। तर, पाउलिन्हो एक सिजन मात्र बार्सिलोनामा बिताए। बार्सिलोनामा पाउलिन्होले ला लिगा र कोपा डेल रे उपाधि..
२८ वर्षपछि इंग्ल्याण्ड सेमिफाइनलमा, रसिया टाइब्रेकरमा चुके पछि क्रोएसियाको भाग्य चम्कियो
काठमाडौं, असार २४ । जारी विश्वकप फुटबलमा आयोजक रसियालाई टाइब्रेकरमा पराजित स्तब्ध पार्दै क्रोएसियाले सेमिफाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ । त्यस्तै, शनिबार नै भएको अर्को क्वाटरफाइनल खेलमा स्वीडेनलाई २–० ले हराउँदै इंग्ल्याण्ड २८ वर्षपछि विश्वकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । अब यस नतिजा आएसँगै सेमिफाइनलको खेलमा क्रोएशियाले इंग्ल्याण्डको सामना गर्नेछ । शनिबार राति भएको खेलमा क्रोएसियाले रसियालाई टाइब्रेकरमा ४–३ गोल अन्तरले..
बेलायतको लर्ड्समा हुने खेलका लागि नेपाली क्रिकेट टोली घोषित, एमसिसी र नेदरल्याण्ड्ससँग भिड्दै
शनिबार, आषाढ २३, २०७५ साल
काठमाडौँ, २३ असार : बेलायतको लर्ड्समा हुने मेरिलोबन क्रिकेट क्लब (एमसिसी) र नेदरल्याण्ड्ससँग खेल्नका लागि २० सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको छनोट भएको छ । आइसिसीका प्रतिनिधि अमिनुल इस्लाम, राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारस खड्काको छनोट समितिले २० सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो । छनोट हुनेमा कप्तान खड्कासहित विनोद भण्डारी, सुवास खकुरेल र प्रदीप ऐरी छन् ।..
काठमाडौं, असार २२ । रुसमा जारी विश्वकप २०१८ अन्तर्गत शुक्रबारबाट क्वाटरफाइनलका खेलहरु सुरु हुँदैछन् । जसअनुशार शुक्रबार नेपाली समयअनुसार बेलुकी ७ः४५ बजे हुने पहिलो खेलमा उरुग्वे र फ्रान्स भिड्नेछ । त्यस्तै, शुक्रबार नै हुने राति ११ः४५ बजेको खेलमा ब्राजिल र बेल्जियमबीच अत्यन्तै रोमाञ्चक प्रतिश्पर्धा हुनेछ । यसअघि प्रि–क्वाटरफाइनलको खेलमा क्रिश्चियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा रहेको पोर्चुगललाई २–१ गोल अन्तरले हराउँदै उरुग्वेले क्वाटरफाइनलको यात्रा तय..
विश्वकप–क्वाटरफाइनल शुक्रबारदेखि, कुन-कुन देशको स्थान सुरक्षित !
काठमाडौँ, २१ असार विश्वकप फूटबल प्रतियोगिताअन्तर्गतको क्वाटरफाइनल खेल भोलि शुक्रबारदेखि शुरु हुने भएको छ । रसियामा जारी उक्त प्रतियोगिताअन्तर्गत शुक्रबार दुई खेल हुनेछन् जसमा पहिलो खेलमा नेपाली समयअनुसार ७ः४५ बजे उरुग्वेले फ्रान्सको सामना गर्नेछ भने दोस्रो खेल राति ११ः४५ बजे ब्राजिल र बेल्जियम आमनेसामने हुनेछन् । जारी प्रतियोगितामा उरुग्वेले पोर्चुगललाई २–१ ले पराजित गर्दै क्वाटरफाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्यो । यता फ्रान्सले भने..
काठमाडौँ, २० असार रुसमा जारी विश्वकपको प्रिक्वाटरफाइनलका खेलहरू गएराति समाप्त भएसँगै प्रतियोगिताको रोमाञ्च उत्कर्षमा पुगेको छ । रुस विश्वकपको अन्तिम आठसम्म आइपुग्दा विश्वकपका दाबेदार मानिएका जर्मनी, अर्जेन्टिना, पोर्चुगल, स्पेन, मेक्सिकोजस्ता टोलीहरू घर फर्किए भने थुप्रै उत्कृष्ट खेलाडीको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो । प्रतियोगितामा कम चर्चित खेलाडीहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आफ्ना टिमलाई अघि बढाएका छन् । अघिल्लो विजेता जर्मनी समूह चरणको अन्तिम खेलमा मेक्सिकोसँग पराजित..
विश्वकप फुटबल : शुक्रबारदेखि सेमिफाइनलका लागि भीडन्त, अबका प्रतिस्पर्धा यस्ता छन्...
काठमाडौं, असार २० । रसियामा जारी फिफा विश्वकप अन्तरगत प्री–क्वाटरफाइलनका खेल सकिएसँगै अब यही शुक्रबारदेखि क्वाटरफाइलनका खेलहरु सुरु हुँदैछन् । मंगलबार रातीको खेल सकिएसँगै उत्कृष्ट ८ टोलीको टुंगो लागिसकेकाले फिफाले पनि क्वाटरफाइलनका लागि तयारी सुरु गरिसकेको छ । विश्वकपमा सहभागी ३२ राष्ट्र मध्ये समूह चरणबाटै १६ र अन्तिम १६ बाट ८ गरी कुल २४ टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरीसकेकेका छन् । जसअनुशार अब आयोजक रुससहित,..
विश्वकपमा सधैं अभागी ठहरिने इंग्ल्याण्डको भाग्य कोलम्बियाविरूद्धको खेलमा चम्केला त ?
एजेन्सी, १९ असार विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा मंगलबार इंग्ल्याण्डले कोलम्बियाको सामना गर्दैछ। छैठौँ पटक आमने सामने हुन लागेका यी दुई राष्ट्रबीचका पाँच वटै खेल इंग्ल्याण्डको पक्षमा गएको छ। तर सन् २०१२ यता युरोपेली मुलुकसँगको कुनैपनि खेल कोलम्बियाले गुमाएको छैन। ६ खेलमा जीत हात पारेको उसले २ खेलमा बराबरी गरेको छ। कोलम्बियाका कोच होजे पिकेमनले सन् २०१२ मा कमान सम्हाले यता कोलम्बिया फर्ममा छ।..
काठमाडौ, असार १९ । रुसमा जारी विश्वकपको प्री–क्वाटरफाइनल खेल अर्थात् अन्तिम १६ मा रहेको जापानको अब यसभन्दा अगाडीको यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ । अब यससँगै सबै एशियाली टिमहरु यसपटकको विश्वकपबाट बाहिरिएका छन् । एशियाको अन्तिम आशाकोरुपमा रहेको जापाललाई सोमबार बेल्जियमले ३–२ गोलअन्तरले हराएसँगै एशियाको यसपटकको विश्वकप यात्रा समाप्त भएको हो । नकआउट चरण अन्तरगत सोमबार राति भएको खेलमा सुरूमा जापानले अग्रता लिएको..
Results 1917: You are at page 46 of 64